५० एसपीको सरुवा, को कहाँ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
५० एसपीको सरुवा, को कहाँ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ५० एसपीको सरुवा गरिएको छ । आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको निर्णयअनुसार शुक्रबार उनीहरुको सरुवा भएको हो ।
भदौ महिनाको तलबसमेत हाल सरुवा भएको स्थानबाट खान पाउने गरी एसपीहरुको सरुवा भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले साँझ जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
ट्याग्स: एसपी, नेपाल प्रहरी